ထရမ့်လက်အောက်မှာ တာဝန် မထမ်းဆောင်လိုတာကြောင့် ပနာမား သံအမတ်ကြီး နုတ်ထွက် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး ထရမ့်လက်အောက်မှာ တာဝန် မထမ်းဆောင်လိုတာကြောင့် ပနာမား သံအမတ်ကြီး နုတ်ထွက်
U.S. Deputy Chief of Mission John Feeley in Mexico speaks duringaceremony atahangar of the Secretariat of National Defense in Mexico City, November 8, 2010. The United States has given to Mexico two helicopters as part of the Merida initiative plan to provide Mexico equipment and training to fight drug traffickers. REUTERS/Eliana Aponte (MEXICO - Tags: POLITICS SOCIETY)
ထရမ့်လက်အောက်မှာ တာဝန် မထမ်းဆောင်လိုတာကြောင့် ပနာမား သံအမတ်ကြီး နုတ်ထွက်
ပနားမားဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး ဂျွန် ဖီးလေးဟာ အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ် ထရမ့်လက်အောက်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုမှု မရှိတာကြောင့် ရာထူးကနေ နုတ်ထွက်သွားပါတယ်။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဒီဇင်ဘာလက ဖရီးလေးရဲ့ နုတ်ထွက်စာကို လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန် သမ္မတက အာဖရိကနိုင်ငံတွေ၊ ဟေတီတို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုခဲ့တဲ့ မှတ်ချက်အပေါ် သံအမတ်ကြီး ဖရီးလေးက နှစ်သက်မှု မရှိတာကြောင့် ရာထူးကနေ နုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ နီးစပ်သူတွေက ပြောပါတယ်။
သံအမတ်ကြီးဟာ လက်တင်အမေရိကန်မှာ သံအမတ်အဖြစ် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာ တာဝန်ယူခဲ့ပေမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းပြချက်ကြောင့် ရာထူးက ထွက်ခဲ့တာလို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။
ထရမျ့လကျအောကျမှာ တာဝနျ မထမျးဆောငျလိုတာကွောငျ့ ပနာမား သံအမတျကွီး နုတျထှကျ
ပနားမားဆိုငျရာ အမရေိကနျ သံအမတျကွီး ဂြှနျ ဖီးလေးဟာ အမရေိကနျ သမ်မတ ဒျေါနယျ ထရမျ့လကျအောကျမှာ တာဝနျထမျးဆောငျလိုမှု မရှိတာကွောငျ့ ရာထူးကနေ နုတျထှကျသှားပါတယျ။
အမရေိကနျ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနဟာ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈ ဒီဇငျဘာလက ဖရီးလေးရဲ့ နုတျထှကျစာကို လကျခံခဲ့ပါတယျ။ အမရေိကနျ သမ်မတက အာဖရိကနိုငျငံတှေ၊ ဟတေီတို့နဲ့ ပတျသကျပွီး ပွောဆိုခဲ့တဲ့ မှတျခကျြအပျေါ သံအမတျကွီး ဖရီးလေးက နှဈသကျမှု မရှိတာကွောငျ့ ရာထူးကနေ နုတျထှကျခဲ့တာဖွဈတယျလို့ နီးစပျသူတှကေ ပွောပါတယျ။
သံအမတျကွီးဟာ လကျတငျအမရေိကနျမှာ သံအမတျအဖွဈ နှဈပေါငျးမြားစှာကွာ တာဝနျယူခဲ့ပမေယျ့ ပုဂ်ဂိုလျရေးဆိုငျရာ အကွောငျးပွခကျြကွောငျ့ ရာထူးက ထှကျခဲ့တာလို့ အမရေိကနျ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ဒုတိယဝနျကွီးက ပွောပါတယျ။
Previous articleပုသိမ်မှာ ဝေလငါး အသေတစ်ကောင် သောင်တင်
Next articleမိန်းကလေးတစ်ဦးရဲ့ ညစ်ညမ်းပုံတွေ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ တင်ပြီး ငွေညှစ်သူကို အမှုဖွင့်